Akhriso: Heshiiska Dhuusamareeb iyo nooca doorasho ee lagu heshiiyay – Kalfadhi
August 21, 2020 Hassan Istiila
Saddex maamul Goboleed oo kala ah Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Galmudug, maamulka Gobolka Banaadir iyo madaxda dowladda federalka ayaa xalay heshiis ku gaaray magaalada Dhuusamareeb.
Waxaase xusid mudan in Dowlad Goboleedyada Puntland iyo Jubbaland aysan shirka kasoo qayb galin, waxaana madaxda ay shegeen in ay ka xunyihiin balse lama ogga go’aankooda.
Guddigu waxay 8 Agoosto 2020 bilaabeen qorshe hawleedkoodii ku aadanaa xal u helida arrimaha loo idmadey. Wada tashi baahsan oo ay layeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, Xisbiyada Siyaasadeed iyo Beesha Caalamka kaddib, Guddigu waxay wada tashi iyo falaanqeyn dheer kaddib Madaxda Qaranka u gudbiyeen saddex qaab doorasho oo ay kamid tahay mid ku salaysan Ergo Deegan doorasho: (Electoral constituency caucuses).
Heshiiskan ayaa u baahan in dib loogu celiyo Baarlamaanka si uu sharci u noqdo.
Halkan ka akhriso qodobada lagu heshiiyay:-
Sii-hayaha ku-xigeenka wakiilka Mareykanka ee QM oo ka hadashay go’aankii Baarlamaanka ee kalsooni kala noqoshada Xasan Kheyre